I-Tropical Haven - 2 amakamelo okulala eMaraval
Port of Spain, i-Trinidad ne-Tobago
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Rosalind
Leli fulethi elibanzi nelishisayo linamagumbi amabili okulala namagumbi okugeza amabili, kanye nekhishi elikhulu elivulekile elinohlelo oluvulekile kanye negumbi lokuphumula.Kukhona nedamu likanokusho engadini enothile. Itholakala endaweni ethulile e-St. Andrews Golf Course e-Moka futhi iqhele ngemizuzu engu-20 kuphela eMaracas Beach noma ePort of Spain.
Kunekhishi elikhulu elinepulani elivulekile nendawo yokuhlala, evulekile kodwa evikelekile. Lokhu kuvumela ukugeleza kwamahhala komoya ohelezayo futhi kuvumela izivakashi zizwe ukuthi zicwiliswe ngokuphelele engadini yasezindaweni ezishisayo.Kukhona futhi namakamelo okulala amabili amakhulu ahelezayo (angaba ne-air-conditioning), ngalinye linendlu yalo yokugezela evulekile.Izivakashi zinendawo yokungena yangasese nendawo yokupaka. Ukhululekile ukubhukuda echibini engadini yangemuva evundile, kodwa kufanele wabelane ngesikhala nami kanye nezinhlobo eziningi ezahlukene zama-hummingbirds!
Indawo ethule enhle ezungezwe esigodini esiluhlaza ku-Northern Range, ehlinzeka ngohambo oluhle nokubukwa okumangalisayo phezu kwenkundla yegalofu.Kuyindawo ephephile eyimizuzu engama-20 ukuya ePort of Spain futhi ngendlela efanelekile, esendleleni eya oGwini oluseNyakatho neMaracas Beach. Kukhona igrosa eseduze kakhulu (imizuzu emi-5 ngemoto).
Ngihlala endlini esondelene nefulethi lakho, nokho indawo yakho ingeyakho kakhulu.Ngiyajabula ukuxoxa ngekhofi eliphekwe ekhaya noma i-cocktail kodwa ngikushiye ngokuphelele ekuboneni kwesiqashi.